Madaxweyne Silaanyo Oo U Dhoofay Dalka Ingiriiska Kana Waramay U Jeedada Safarkiisa.Daawo/Akhriso +Sawiro | Somaliland Today
← Madaxweynaha J.S.L Wuu ku Saxan yahay,go’aanka uu dib ugu soo celiyay xubintii COMMISIONKA Doorashooyinka Qaranka Ee xisbiga WADDANI. W/Q.Maxamed Axmed Cali
“Doorashadu Xiligeedi Ayay Ku Qabsoomaysa Wax Ka Bedel-mayaana Ma Jiraan”. Madaxweynaha Somaliland. →
(SLT-Hargaysa) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mud. Axmed Maxamed Maxamuud (Silaanyo) ayaa maanta u dhoofay dalka Ingiriiska, Madaxweynaha oo Saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ka hor intaanu ka duulin, ayaa ka waramay maxsuulka safarkiisa.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu dalka Ingiriiska kaga qayb galaayo shir caalamiya oo lagaga hadlaayo Maal gadhisa, isagoo sheegay inay ku soo bandhigi doonaan waxyaabaha suurto galka ka ah dalka ee la maal gashan karo. Madaxweyne Axmed Silaanyo oo arrimahaas ka hadlaaya ayaa yidhi. “Waxaan u safrayaa waddanka Ingiriiska, oo aan kaga qaybgaalayo shir maalgashiga lagu soo bandhigaayo, waxaan rajaynayaa in aanu dawladda Ingiriiska iyo cida shirka qaban qaabinaysaba u soo bandhigo waxyaabaha suurto galka ka ah Somaliland, ee la maal gashan karo si dalkeena dhaqaalihiisu u noqdo mid kobocsan”.
Madaxweynaha Somaliland wuxuu sidoo kale ka hadlay qabsoomida doorashooyin oo uu sheegay inay ku qabanayaan muddada loogu tallo galay, Geesta kale wuxuu Madaxweye Silaanyo ka dhawaajiyay in aanay Somaliland ka qayb galayn shirka lagu qabanaayo dalka Denmark haddii aan si gooniya loo casuumin Somaliland.
Halkan Ka Daawo Hadalkii Madaxweynaha Oo Dhamaystiran.